AVG VPN Ongororo (2020) - Iwe Unonyatsoda Izvi? - Ongorora
AVG VPN Ongororo (2020) - Iwe Unonyatsoda Izvi?
Virtual Private Network (VPN) yakakura mukuzivikanwa mumakore apfuura. Nhau nezve yechitatu-bato dhata yekutengesa uye kushambadzira ine mukana wekushandisa zvakavanzika zvakatungamira vanhu kukudziridza kuziva. VPN hapana mubvunzo chikomborero chevanhu vari paInternet.
Pakati peaya maVPN, pane imwe inomira pachena nekuda kwezita rayo uye kuvimbika, iyo AVG VPN. Zvino, kana iwe wanga usingazive, Avast akawana AVG muna2016, asi zvikamu zviviri izvi zvinoshanda zvakasiyana. Zvisinei, AVG VPN ine zvimwe zvakafanana neAvast's VPN (SecureLine).
Kana iwe uchinetseka kuti iyo AVG server yakakodzera kuwana kana kwete, ongororo iyi inounza iwe yakazara ruzivo. Inovhara zvakakosha izvo zvaunofanira kufunga usati watenga VPN uye nekuita sarudzo pfupi pane iyo hwaro.
Kutsvaga zvimwe zvinoshamisa zveVPN Deals? Tarisa Nhema Chishanu VPN Tengesa kubva kuNordVPN & ExpressVPN.
AVG VPN - Yakadzama Ongororo yeZvese Zvimiro
Usati wapinda mukudzokororwa, funga nezveAVG seyekutanga VPN mupi. Inoshaya zvakawanda zvinokwezva maficha izvo zvazove zvakajairwa kune yakanyanya kubhadharisa kana yakajairwa VPN vanopa. Nekudaro, ine iri nyore mushandisi interface uye yakapusa dhizaini nekuda kwekushomeka kwezvinhu zvakaoma.
AVG parizvino ine anopfuura makumi mashanu neshanu maseva, uye inowanikwa munyika makumi matatu nenomwe. Kana iwe uchiienzanisa neyakazara-yakazara uye akakurisa maVPN seNord, AVG haimire mukana. Nekudaro, ongororo iyi inotarisa pakuongorora mashandiro eAVG uye kukosha kwayo kwese kukubatsira kusarudza. Naizvozvo, iwe haugone kuwana enzaniso zhinji asi kuongororwa kwakazara kwebasa reVPN.
AVG ine yakakosha bhenefiti yekuve mushoma-anozivikanwa VPN mupi. Zvisinei, inosanganiswa nezita guru. Nekudaro, iri nyore kutora Geolocked nekukurumidza. Iyo geolock ndeye apo mupi webasa (Webhusaiti, App, nezvimwewo) inosarudza kuvharira VPN Provider server. VPNs dzinonyanya kushanda nekukubatanidza iwe kuseva kubva kune imwe nzvimbo.
1. Kubatanidza Speed
Vanenge vese veVPN mupi ari kushanda nesimba mukugadzira maseva matsva kuti akuunze wakanyanya kukurumidza. Isu tese tinoda kumhanya kwatinobhadhara, asi VPN inoda reroute yekubatana kwako kuburikidza neimwe sevha. Kazhinji, zvinoreva kuti pachave nekushomeka kwekumhanya. Dzimwe nguva mukaha unogona kuve wakakosha.
AVG zvirokwazvo inotsvedza mune ino dhipatimendi. Maserver ayo akanaka akanaka mudunhu reEuropean, aine angangoita 90% yekumhanyisa kugadzirisa. Munharaunda yeNorth America, inochengetedza ingangoita 75% yekumhanya. Nekudaro, maseva mune chero imwe nyika uye dunhu ane musiyano wakakura mukumhanya, kutenderedza 10-25% yezvaunogona kuwana zvakanyanya.
Uku kumhanya kuchiri kukodzera zvine musoro kuyerera kana kurodha zvirimo . Zvisinei, hazvizokutenderi kuti uve nezvakawanda zvekubatsira-yakawanda pamwe nerubatsiro rwemamwe maseva. Saka inotsvedza ipapo.
2. Rudzi rweZvinyorwa
Iko kushandiswa kwekutanga vanhu vazhinji vane kweVPN ndeyekuwana zvakatemerwa kana zvakarambidzwa zvemukati. Iwe unogona kuita sarudzo, uye une mvumo yekuona chero zvemukati zvaunoda. Nekudaro, vazhinji vanopa masevhisi evanopa kana hurumende vanoisa bhendi kana kurambidzwa pane izvi zvirimo.
VPN inokutendera kuti ufambise zvirimo. Ngatione kuti zvakanaka sei AVG fairs mukuwana izvo zvemukati pane akasiyana mapuratifomu.
3. kuyerera zvirinyore
Kunyangwe kushomeka kwemaseva, AVG ine inorumbidzwa yekushambadzira sevhisi yekuwana. Iwe unogona kuvhura Netflix kana chero chimwe chirongwa chakakurumbira uye kuyerera kwenzvimbo yako. Kazhinji yenguva, imhepo, uye iwe unokwanisa kuwana zvemukati zvemukati.
Nekudaro, kana AVG ikasaisa mari mukugadzira maseva akasimba, inogona kuve tarisiro kumakambani makuru kuvhara maserver. Parizvino, ndeimwe yevanogadzikana VPN vapeji ekushambadzira zvemukati online. Sezvaunenge uchitoziva, inopa inokurumidza kumhanya yekubatana kwako, kunyangwe nemaseva asiri kuita.
4. Torrent ine AVG VPN
AVG inoita zvisingatarisirike mushe maererano nemahova uye kusimbisa kubatana. Nekudaro, pane kushomeka kwekufambisa kwechiteshi, saka izvo zvishoma zvishoma zvinovimbisa. Iyo peer-to-peer yekubatanidza inowanikwa neAVG, uye izvo zvakare zvinowirirana nevazhinji veprimiyamu VPN vanopa sevhisi. Naizvozvo, iwe uri mune yekurapa nehunyanzvi hweAVG muchikamu chino.
Nekudaro, kushomeka kwemaseva uye kuwana zvinogona kuramba zvichimisikidza imwe nzira yekudzokera. Izvo hazvina kukwana kukuisa iwe kure asi zvinogona kuda kuti iwe uite kumwe kubhurawuza usati wasarudza sevha.
5. Kuchengetedza Kuchengetedza
VPN yakanaka inofanira kukuunzira kuchengetedzeka kwakanyanya. Ndiyo yekutengesa inonyanya kukwezva yeVPN sezvo ichideredza zvinogona kutyisidzira kubatana kwako. Usati washandisa sevhisi yeVPN, zvakakosha kuti utarise kuchengetedza kwayo.
Kutenderera uye zvemukati zvakanaka, asi apa ndipo pauchazoita mutsauko wakakura. Heano kuongorora nekukurumidza kwekuchengetedzwa kweAVG:
Iyo ine 256-bit encryption, iyo inonyanya kushamisa maererano nesecurity, kunyanya neOpenVPN. Zvisinei, zviri pachena kuti PC, uye vamwe namano kushaya encryption ichi. Naizvozvo, isarudzo yakanaka kana iwe uchida kuchengetedzeka muPC yako, asi hazvizofambe zvakanaka pamafoni efoni.
Iko kushomeka kweye smartphone uye kumwe kunyorera kwedhisheni mune tech-savvy nyika ine hombe dhizaini dhizaini zvechokwadi inoisa AVG leigi kumashure kwevamwe VPN vanopa.
Iko hakuna adblocker mune yeVPN app. Kushaikwa kwemaficha kunovimbisa kuti iwe uchazotenga iyo AVG webhu bhurawuza iyo inounza kushambadzira inodzivirira kugona. Iko hakuna anti-malware rutsigiro kana. Mumashoko akareruka, AVG inoshaya kunyangwe chekutanga chekutanga chengetedzo icho chaunogona kupihwa newe nevamwe vanopa seVPN.
8. Log zvinyorwa
Vazhinji vanopa VPN sevhisi vaunza shanduko nyowani yekusachengeta mushandisi data zvachose. Iko hakuna chero kutema matanda, uye vamwe vanotopa kutonga kune vashandisi. Iwe unogona kusarudza kana iwe uchida marekodhi ako 'marekodhi kana kwete, uye izvi zvichachengetwa zvakachengeteka. AVG haina imwe yesarudzo idzi.
Iyo haina kuongorora yako internet chiitiko asi zvirokwazvo inochengetedza matanda. Wakabatana riinhi, yakawanda sei bandwidth yawakashandisa? Zvese izvi ruzivo zvakachengetwa kusvika kumazuva makumi matatu. Mune mamwe mazwi, nepo isiri hazvo kukuvadza, AVG inochengeta kiyi. Naizvozvo, haina kuvimbika sevamwe maVPN mumusika.
Kugarisana kweAVG VPN:
Iyo AVG VPN inonyanya kuwanikwa kune windows kana iwe uchida kuwana kwayo izere kudzivirirwa uye maficha, kunyangwe pasina yakawanda yacho. Inowanikwa kumafoni efoni uye zvimwe zvishandiso, asi iri pamuganhu wekutanga uye inoshanda nekukurumidza kana uchinge waiisa pane chako kifaa.
Nehurombo, haina kuenderana nema routers, mitambo yemitambo, kana smart TV. Kunyangwe vashandisi veLinux vanofanirwa kumisikidza iyo VPN uye nekuiisa nemaoko. Pakazara, AVG ine yakaderera inoenderana chiyero. Inokodzera windows pane zvakanakisa.
AVG VPN Premium VS AVG VPN Yemahara Muedzo:
Hapana chemahara chakaipa, uye zvakafanana zvinoshanda kune sevhisi yeVPN, chero bedzi iine kambani yekutanga inotsigira iwo mhando. Vamwe vanopa VPN sevhisi vanopa kutenderera kutenderera kwemazuva manomwe zvakanakisa. Zvinogona kunge zvisina kukwana kuti vanhu vazhinji vaone kugona kwebasa reVPN.
Zvichakadaro, AVG VPN inokuunzira 30-mazuva emahara kuyedzwa inopfuura mimwe miedzo. Iyo inokupa iwe inogutsa huwandu hwenguva yekuona kana iyi VPN iri yako kana kwete. Iwe unowana mukana wakazara weyekutanga maficha uye masevhisi. Zvisinei, hapana zvakawanda zvacho.
1. Kukosha Kwemari
Kana iwe uchitaura nezve chaiko kunyoreswa mutengo uye kukosha kwemari, AVG haina kukosha. Zvirinani, inotsvedza zvine mutsindo kwete kana ichienzaniswa nevamwe vanopa varipo. Iyo ine kunyorera mapakeji anodhura zvakanyanya seakawanda akawanda ekupedzisira-ekupedzisira VPN vanopa. Saka kana iwe uchinyatsoda kunyorera, zviri nani kufunga mamwe maVPN.
Iko kune VPN refund mutemo we 30 mazuva. Kana iwe usina kugutsikana, saka unogona kukumbira kudzorerwa mukati memazuva makumi matatu. Iko hakuna chero chakavanzika mamiriro kana bandwidth muganho iwe waunogona kushandisa kudzoserwa kukodzera kana. Kana iwe usina kugutsikana, iwe uchawana kudzoserwa.
3. Kutsigira Kwevatengi
Zvekushandisa kwemahara, sevhisi haina kugutsa sezvo uine mukana wekutaurirana pane zvakanakisa zvakabatana nemhinduro yebhoti. Iyo 24/7 asi haina kukosha, yakakwana kuunganidza ruzivo. Kana iwe uchida chaiyo-nguva rutsigiro, iwe unofanirwa kunyorera kumasevhisi. Kuchengetwa kwevatengi kwevatambi vegiredhi yepamoyo kuri nani.
Kana iwe uchida yekutanga basel VPN sevhisi, saka AVG yaizoita iro basa, asi zvirokwazvo haina kukodzera mari panguva ino chaiyo. Pakave nekumwe kunyunyuta kubva kune vashandisi maererano nekubatana. Imhaka yekushaikwa kwemaseva. Kunze kwekunge kambani ikwanisa kukura, haifambe zvakanaka, uye pane zvirinani sarudzo dzepremiyamu-giredhi VPN.
Iyo kambani iri kuyedza nemaune kukutengesera combo yesoftware akasiyana siyana uye masevhisi aunogona kuwana mune kamwe chete kunyoreswa kubva kune vamwe VPN vanopa. Kana iwe uchitsvaga VPN inoshanda muChina, VPN inokundikana ipapo futi. Izvo hazvina kukodzera mari, uye iwe unofanirwa kufunga nezvevamwe vanopa.
Nekudaro, kana iwe uchida kunakidzwa nemakumi matatu-mazuva kutongwa kweiyo yakanaka VPN pachinzvimbo chekusavimbika mahara maVPN anowanikwa mumusika, inoita basa rinorumbidzwa. Iyo haina akawanda maficha asi yakatwasuka interface. Pakazara, AVG haisi iyo yakanakisa VPN kunze mumusika. Kunyangwe iwe ukasazvienzanisa nemamwe maVPN, hazvipe zvakanyanya kune premium-chikamu sevhisi.
Yakanakisa VPN yeMotoStick (2020)
123Movies Nyowani Webhusaiti - Izvi Zvakachengeteka Kuona Mafirimu?
21 AirPods Pro Matipi uye Matipi aunofanirwa Kuziva
google chromecast yekuwedzera palaptop
maitiro ekugadzira yako hembe pane roblox
mawebhusaiti kuyerera mafirimu emahara
pamusoro pemaoko kutenderera terevhizheni nzvimbo
mitambo yakaita roblox asi yakachengeteka